काठमाडौं वासीहरुका लागि आयाे खुसीको खबर, बल्ल केहि आशा पलायो ! – Khabar28media
काठमाडौं वासीहरुका लागि आयाे खुसीको खबर, बल्ल केहि आशा पलायो !
अहिले उपत्यकामा संक्रमितको संख्या घटेसँगै राजधानीमा को- रोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको मुख्य सरकारी अस्पतालमा शैया खाली हुन थालेको छ । टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन सहितका शैया तथा आइसीयू पनि खाली भएका छन् ।
Previous Article फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा ‘यौ’न उ’त्पी’डन भोग्न परेको थियो : प्रकृती श्रेष्ठ !
Next Article अबदेखी सम्बन्ध विच्छेद गरेका र अविवाहित महिलालाई ४० कटेपछि मासिक भत्ता, पुरा खबर पढ्नुहोस् !!